FRANTSAY VOALAZA FA MATIN’NY PESTA : Ho avy hitaky fanaovana « autopsie » fanindroany ny havany
Lasa raharaha iraisam-pirenena ny pesta eto Madagasikara. Malaza ratsy any ivelany ny valan’aretina pesta eto amintsika. 25 octobre 2017
Nanampy trotraka ny fahafatesan’ny teratany vahiny. Ny sabotsy 21 oktobra lasa teo, raha tsiahivina, dia teratany frantsay mpandraharaha ara-toekarena iray antsoina hoe Philippe izay manana trano fisakafoanana ao Ampanalana no voalaza fa matin’ny pesta tao Toamasina. Teo amin’ny faha-40 taonany izy izao namoy ny ainy izao.
Ny tolakandron’ny sabotsy 21 oktobra io dia natao avy hatrany ny fandevenana. Fandevenana natao teny amin’ny toerana fametrahana ireo razana matin’ny pesta ao Toamasina.Ny loharanom-baovao voaray ny harivan’ny alatsinainy 23 oktobra lasa kosa no nahalalana fa ho avy eto Madagasikara ny havany ka ho tonga any Toamasina. Avy any Frantsa izy ireo izao ho tonga eto Madagasikara izao.
Ny angom-baovao hatrany no nahalalana fa hitaky ny fanaovana « autopsie » fanindroany ny anton-dian’izy ireo. Ho hita eo ny ho tohin’ny raharaha.